တရုတ်လျှပ်စစ်ရေအောက်မြုပ်သောရေစုပ်စက်ထုတ်လုပ်သူများနှင့်ပေးသွင်းသူများ - Depump Technology
နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > နစ်မြုပ် Slurry Pump > လျှပ်စစ်ရေအောက်နှစ်မြှုပ်စေသောရေစုပ်စက်
Electric submersible slurry pump သည်မော်တာနှင့်သဲစုပ်စက်တို့ကိုသမုဒ္ဒရာအတွင်းသို့နစ်မြုပ်စေသည့်ရေထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရေးစက်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်သဲ၊ ကျောက်မီးသွေးမှုန့်များနှင့်အမြီးကဲ့သို့သောအစိုင်အခဲအမှုန်များပါဝင်သောအရည်များကိုသယ်ယူရန်သင့်တော်သည်။ ၎င်းကိုအဓိကအားဖြင့်မြစ်တူးခြင်း၊ မြစ်သဲချခြင်းနှင့်သတ္တုဗေဒလုပ်ငန်းများတွင်အသုံးပြုသည်။ ၎င်းသည်သတ္တုတွင်းများနှင့်အပူစွမ်းအင်စက်ရုံများကဲ့သို့သောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများရှိအရည်များသယ်ဆောင်ရန်နှင့်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအတွက်ရိုးရာ slurry pump များအတွက်အကောင်းဆုံးအစားထိုးဖြစ်သည်။
မြစ်အတွင်း သောင်တူးခြင်း ရေငုပ်သင်္ဘော Slurry Pump
River Dredging Submersible Slurry Pump သည် ကျွန်ုပ်တို့ ကုမ္ပဏီ၏ ရေငုပ်နိုင်သော slurry pump တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဤစီးရီးတွင် ရေငုပ်နိုင်သော slurry ပန့်များသည် ကျစ်လစ်သိပ်သည်းသောဖွဲ့စည်းပုံ၊ ကောင်းမွန်သောစွမ်းဆောင်ရည်၊ တည်ငြိမ်သောလည်ပတ်မှု၊ အဆင်ပြေသောတပ်ဆင်မှုနှင့် လိုက်လျောညီထွေဖြစ်စေသောလှုပ်ရှားမှုများပါရှိသည်။ ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများ၊ စည်ပင်သာယာအုပ်ချုပ်ရေး၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးနှင့် မြစ်သောင်တူးခြင်းစသည့် လုပ်ငန်းများနှင့် အဖွဲ့အစည်းများတွင် အမျိုးမျိုးသော အညစ်အကြေးများ သယ်ဆောင်ရန် စံပြကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။
SS စီးရီး ရေငုပ်လျှော့စုပ်ပန့်
DePump® SS series submersible sludge pump သည် မော်တာနှင့် တိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်သည့် ဟိုက်ဒရောလစ်ယန္တရား အမျိုးအစားဖြစ်သည်။ အရည်ပါရှိသော သဲ၊ ကျောက်မီးသွေးကွန်ဒါအခဲ စသည်တို့ကို ပို့ဆောင်ရာတွင် အသုံးပြုပါသည်။ ရေငုပ်နိုင်သော sludge pump ကို ရေကန်၊ မြစ်၊ ပင်လယ်နှင့် ချဲ့ထွင်ထားသော လမ်းကြောင်း စသည်တို့ရှိ အမှိုက်များကို ရှင်းလင်းရာတွင် အဓိကအားဖြင့် အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ ၎င်းကို မိလ္လာကန်များ ရှင်းလင်းရာတွင်လည်း အသုံးပြုနိုင်သည်။ ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းခွင်၊ စတီးရွိုက်နှင့် ဓာတ်အားပေးစက်ရုံစသည်ဖြင့်၊ ရေငုပ်သွင်းနိုင်သော sludge ပန့်သည် အထူးကောင်းမွန်သော ပစ္စည်း၊ အဆင့်မြင့် ဖွဲ့စည်းပုံကို လက်ခံရရှိပြီး ၎င်းသည် ကျယ်ပြန့်သော ဖြတ်သန်းစီးဆင်းမှုနှင့် ခိုင်ခံ့သော ပေးပို့နိုင်စွမ်းတို့ ပါဝင်သည်။ ဟိုက်ဒရောလစ် အစိတ်အပိုင်းများသည် ခံနိုင်ရည်ရှိသည်။ ပန့်ကို ထိန်းချုပ်ယူနစ်ဖြင့် ပြီးမြောက်သည်။
submersible sludge ပန့်
Submersible sludge pump ၏ အင်္ဂါရပ်များနှင့် အသုံးပြုမှုများ- ရေငုပ်သွင်းနိုင်သော slurry ပန့်ကို ၎င်း၏ ချို့ယွင်းချက်များကို ကျော်လွှားရန်အတွက် စစ်ဆေးမှုနှင့် တိုးတက်မှုမှတဆင့် ဖန်တီးပါသည်။ ဟိုက်ဒရောလစ်မော်ဒယ်၊ တံဆိပ်ခတ်ခြင်းနည်းပညာ၊ စက်ပိုင်းဆိုင်ရာဖွဲ့စည်းပုံ၊ အကာအကွယ်နှင့် ထိန်းချုပ်မှုဆိုင်ရာ ကဏ္ဍပေါင်းစုံတွင် ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် ဆန်းသစ်တီထွင်ထားပါသည်။ ဤထုတ်ကုန်သည် ရိုးရှင်းသောဖွဲ့စည်းပုံ၊ အဆင်ပြေသောတပ်ဆင်မှု၊ ဘေးကင်းပြီး ယုံကြည်စိတ်ချရသောအသုံးပြုမှုနှင့် တာရှည်ဝန်ဆောင်မှု၏ အားသာချက်များရှိသည်။ ပန့်ကို ရေမြုပ်သွားသောအခါတွင် ရှုပ်ထွေးသော မြေပြင်ပန့်အိမ်နှင့် ပုံသေကိရိယာများ ဆောက်လုပ်ရန် မလိုအပ်ဘဲ ဆူညံသံနှင့် တုန်ခါမှု မရှိသည့်အပြင် ဆိုဒ်လည်း ပိုသန့်ရှင်းပါသည်။
စိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်ထားသော လျှပ်စစ်ရေအောက်နှစ်မြှုပ်စေသောရေစုပ်စက် ကိုတရုတ်နိုင်ငံတွင်ပြုလုပ်သောအနိမ့်ဈေးနှင့်စျေးပေါသောစျေးနှုန်းဖြင့်ဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်။ Depump Technology သည်တရုတ်ပြည်၏ကျော်ကြားသော လျှပ်စစ်ရေအောက်နှစ်မြှုပ်စေသောရေစုပ်စက် ထုတ်လုပ်သူများနှင့်ပေးသွင်းသူများဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်ကျွန်ုပ်တို့တွင်ကိုယ်ပိုင်အမှတ်တံဆိပ်များရှိပြီးအမြောက်အများထုပ်ပိုးပါသည်။ ကျွန်ုပ်မှာယူမှုကိုယခုမှာယူလျှင်၊ သင်၌၎င်းမှာရှိပါသလား။ ဟုတ်ပါတယ်! လိုအပ်ပါကကျွန်ုပ်တို့သည်စျေးနှုန်းစာရင်းသာမကဈေးနှုန်းများလည်းပါ ၀ င်မည်ဖြစ်သည်။ ငါလက်ကားရောင်းချင်ရင်မင်းငါ့ကိုဘယ်စျေးနှုန်းပေးမှာလဲ? သင်၏လက်ကားအရေအတွက်များလွန်းပါကစက်ရုံစျေးနှုန်းကိုကျွန်ုပ်တို့ပေးနိုင်သည်။ နောက်ဆုံးပေါ်အရောင်းရဆုံး၊ အဆင့်မြင့်၊ လျှော့စျေးနှင့်အရည်အသွေးမြင့်မားစေရန်ကျွန်ုပ်တို့၏စက်ရုံသို့လာရောက်ရန်သင့်ကိုကြိုဆိုပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ထံမှလျှော့စျေးထုတ်ကုန်များကို ၀ ယ်ယူရန်စိတ်ချနိုင်ပါသည်။ ငါတို့သည်သင်တို့နှင့်အတူပူးပေါင်းမျှော်လင့်, သင်ပိုမိုသိလိုလျှင်, သင်ယခုကျွန်တော်တို့ကိုတိုင်ပင်ဆွေးနွေးနိုင်, ငါတို့အချိန်မီသင်ပြန်ကြားမည်!